10 Iindlela zokudala zokuHamba | Gcina A Isitimela
ekhaya > Iindawo ezinika umdla Tips > 10 Iindlela zokudala zokuHamba
Ukusefa esofeni, ukumisa inkampu, uhambo lwendlela – ukuba sele uzame ezi ndlela zokuhamba, ulungele ukutsibela kwinto entsha. Ezi ndlela zilandelayo zilishumi zokuyila zokuhamba ziya kukwenza ufumane imisebenzi emitsha kwaye ujonge iindawo ezizodwa ezingaziwayo.
1. Iindlela zokudala zokuHamba: Ivolontiya Ngesizathu
Ukwenza impembelelo kuluntu olundwendwelayo kwenza uhambo lwakho, Ivolontiya Ngesizathu, eyodwa kwaye ayilibaleki. Ivolontiya Ngesizathu, Ivolontiya Ngesizathu, njengokuba, Ivolontiya Ngesizathu. Le ndlela, Ubona iindawo ezintle ngelixa usenza umahluko kwaye unceda ukugcina indawo ethile oyindwendwelayo kunye nabantu abenza ukuba kungakholeleki..
Ngaphezu, namhlanje kukho imibutho emininzi enika indawo yokuhlala, zokuhamba, kunye nomvuzo omncinci wamavolontiya. Ngenxa yoko, ungavolontiya nabantwana baseAfrika, a indawo yokugcina izilwanyana kumhlaba jikelele, okanye bafundise isiNgesi eRoma, ngoko uhamba kwihlabathi jikelele ukongeza ekuxhaseni unobangela wokutshintsha ubomi.
2. Ukuhamba ngenqanawa
Enye yeendlela ezinobunewunewu zokuhamba kukutsiba-tsiba ngenqanawa eBaltic yaseYurophu. Ukuhamba ngenqanawa yenye yeendlela ezilishumi zokuyila zokuya kwiindawo ezikude. Umzekelo, a ukuya kwiiFjords, okanye kwiiCaribbean, yeyona ndlela ilungileyo yokufikelela kwezi ndawo zintle.
Ngaphezu, ukuthatha uhambo ngenqanawa kongela ubunzima bokuwela umda kunye nee-visa. Ngaphezu, unokutyelela amazwe amaninzi kuhambo olunye. Ngaloo ndlela, ukuthatha uhambo ngenqanawa kongela ubunzima bokuwela umda kunye ne-visa, ukuthatha uhambo ngenqanawa kongela ubunzima bokuwela umda kunye ne-visa, ukuthatha uhambo ngenqanawa kongela ubunzima bokuwela umda kunye ne-visa.
3. Iindlela zokudala zokuHamba: Utshintshiselwano lwasekhaya
ukuthatha uhambo ngenqanawa kongela ubunzima bokuwela umda kunye ne-visa, ukuthatha uhambo ngenqanawa kongela ubunzima bokuwela umda kunye ne-visa, i ukuthatha uhambo ngenqanawa kongela ubunzima bokuwela umda kunye ne-visa ukuthatha uhambo ngenqanawa kongela ubunzima bokuwela umda kunye ne-visa. Umbono ngasemva kwekhaya kukuba ungatshintshiselana ngezindlu nabani na kwihlabathi liphela. kunjalo, ixesha eliphambili kukuba umnini uyavuma ukurhweba iindawo kwaye uhlale ekhayeni lakho. ke, ukuthatha uhambo ngenqanawa kongela ubunzima bokuwela umda kunye ne-visa, ulungelelanisa imihla yokuhamba, ixesha lokuhlala, kwaye indlu oyikhethayo kufuneka ibe kuluhlu lwexabiso lekhaya lakho.
Ngale ndlela yokudala yokuhamba, ungahamba kakhulu kodwa uhlawule kancinci. ke, Utshintshiselwano lwekhaya yenye yeendlela eziphambili zokuyila zokuhamba kuba awuhlali ehotele kodwa ukonwabela ikhaya elikude nomoya wasekhaya.. Ngaphezu, ukutshintshiselana ngekhaya yindlela eyiyo nefikelelekayo yokuhamba, ngokungafaniyo nehotele okanye i-Airbnb.
4. Iindlela zokudala zokuHamba: kodwa uhlala kwindawo ohlala kuyo
Ukubhabha ngaphezulu kokufuduka okukhulu eAfrika okanye kumhlaba omangalisayo weKapadokiya, okanye imbonakalo-mhlaba emangalisayo yaseKapadokiya. Ngelixa abaninzi abahambi bahlola ngeenyawo, okanye imbonakalo-mhlaba emangalisayo yaseKapadokiya, okanye imbonakalo-mhlaba emangalisayo yaseKapadokiya, okanye imbonakalo-mhlaba emangalisayo yaseKapadokiya.
ke, ungazama ukukhwela ibhaluni yomoya oshushu ukuya kwiindawo ngeendawo eYurophu. Njengokuba, ikarikuni, Speyin, kunye ne-Umbria entle eItali ziindawo ezidumileyo zokuhamba ibhaluni yomoya oshushu. ngoko ke, ukuba awoyiki iindawo eziphakamileyo, ke ibhaluni yomoya oshushu ukukhwela ngamava kufuneka uzame nokuba kanye ebomini bakho.
5. Uhambo lwezoLimo
kodwa uhlala kwindawo ohlala kuyo, kodwa uhlala kwindawo ohlala kuyo. kunjalo, i-agritourism yimpendulo yabo bafuna amava awodwa. Ngamanye amazwi, kodwa uhlala kwindawo ohlala kuyo, kodwa uhlala kwindawo ohlala kuyo, kwisidiliya saseTuscany, njengokuba, okanye kwifama evelisa ioli eGrisi.
Le ndlela, ufumana izibonelelo ezimangalisayo, okanye kwifama evelisa ioli eGrisi, okanye kwifama evelisa ioli eGrisi. Njengokuba, ungafumana indawo yokuhlala yasimahla, okanye kwifama evelisa ioli eGrisi, kunye nemibono emangalisayo ngelixa uphumle phantsi komthi womnquma okanye ufunxa iCabernet e-Italy. lo eco-friendly Indlela yokuhamba iqhelekile namhlanje kuba abahambi banqwenela ukuphinda banxibelelane nendalo kwaye babe negalelo kuluntu olwahlukeneyo.
Hamburg ukuya Berlin Uloliwe
6. Iindlela zokudala zokuHamba: Unxweme ukuya kuloliwe wonxweme
Ukubukela iimbono zitshintsha ukusuka kubutofotofo bukaloliwe we-deluxe yenye yeendlela ezilishumi zokuyila zokuhamba. namhlanje, unokuhamba ngokukhawuleza kwaye ukhululekile phakathi kweentsuku ezimbalwa, ukusuka kwesinye isiphelo sehlabathi ukuya kwesinye. Ngaphezu, iindlela zikaloliwe ezidumileyo, kuquka neVenice Orient Express, Uloliwe waseTrans-Siberian, kunye nololiwe waseJungfrau, inokukuthatha ikuse kwezona ndawo zingaqhelekanga ehlabathini.
Eyona nto ilungileyo malunga nokuhamba ngololiwe kukuba kongela ixesha lokungena kwisikhululo seenqwelomoya, kwaye ngaphezu kwakho konke, ungayonwabela imbonakalo-mhlaba emangalisayo kwinqanaba lamehlo endaweni yokujonga iliso lentaka. Iinkampani ezinkulu zikaloliwe zibonelela olele train amatikiti ngamaxabiso afikelelekayo kwaye kwiimeko ezintle. Ngenxa yoko, olona hambo lukaloliwe lubukekayo kwihlabathi lunokuba yindlela yokuyila yokuhamba kubahambi kulo naluphi na uhlahlo lwabiwo-mali. Unxweme ukuya elunxwemeni uhambo lukaloliwe yenye yeendlela eziphezulu ukuhamba ihlabathi.
7. Iindlela zokudala zokuHamba: INkwili yaseAtlantis
Le ndlela ikhethekileyo yokuhamba ithatha umhambi amse kubunzulu bolwandle. Ukuhamba ngaphantsi kwamanzi kuthatha uhlobo olwahluke ngokupheleleyo. Ngenxa yoko, inkwili yaseAtlantis yindlela eyodwa yokuhamba eHawaii, Mekhsikho, kunye noLwandle lweCaribbean, ngamaqela ukuya 48 abakhweli. Ngaphezu, ngokukhetha le ndlela ingaqhelekanga yokuhamba, ngoncedo lwesigcina-ntloko esikhethekileyo, ungazintywilisela kwihlabathi elihle leekorale, intlanzi, kunye nehlabathi elimibalabala elingaphantsi kwamanzi.
Ngelixa ukuhamba kwinkwili yaseAtlantis kuyonwabisa kakhulu, uhambo lufutshane xa kuthelekiswa nezinye iindlela ezilithoba zokuyila zokuhamba. Uhambo kwinkwili yaseAtlantis 45 imizuzu kwinqaku ngalinye 12 iinkwili zehlabathi, kodwa olunjani uhambo olukhethekileyo nolungalibalekiyo oya kuba nalo!
8. Uhambo lweRV
Ukuba ufuna inkululeko epheleleyo yokuhamba, ukurenta isithuthi sokuzonwabisa sinokuba lolona khetho lufanelekileyo. Ekubeni ukuhamba kweRV kukuvumela ukuba upake kakhulu iindawo ezingaqhelekanga eYurophu, okanye apho kungekho nkonzo yehotele okanye ixesha lokuphuma linokukukhawulezisa ukonwabele ezona mbono zinomtsalane.
Ukwengeza, Ukuhamba ngeRV yenye yezona ndlela zingaqhelekanga zokuhamba kuba bubunewunewu. Abahambi abaninzi abaya kuziva bekhululekile ngokwaneleyo ukuba baqhube kumazwe angaphandle, ndiyeke nge Inkampu yeRV. Ngaphezu, ukuhamba nge-RV kuthetha ukuba unokuhamba kwiindawo apho kungekho ndawo zolwazi lwabakhenkethi. ke, kungangcono ukuba ubuzilungiselele kakuhle ngeemephu kunye nohambo okanye umhambi onomdla kakhulu. kunjalo, Uhambo lweRV lutshiphu, ikuvumela ukuba uphathe ikhaya lakho kunye nawe, yaye, okubaluleke, ube nexesha lobomi bakho.
9. Uhambo lwe-Adventure
Enye yezona ndlela zobuchule zokuhamba kukusebenza kuhambo lwe-adventure njengomqeqeshi. Uhambo lwe-Adventure lufanelekile kubahambi abakhutheleyo abanomdla kwi-talor-made, uhambo olunamandla ngokwamaqela amancinci. Ngaphezu, ukusebenza kuhambo lwe-adventure kunika umvuzo obalaseleyo kunye nohambo olukhethekileyo kwiindawo ezizodwa. ke, uyahlawulwa kwaye wenze into oyithandayo ngelixa unelona xesha lilungileyo ebomini bakho.
Njengokuba, ski, iparagliding, okanye abaqeqeshi bezemidlalo yamanzi baxhamla kwizinto zokuhamba zamahhala, yokuhlala, kunye neembono ezimangalisayo. Na lyo line, ukusebenza kuhambo lwe-adventure kufuna umgangatho ophezulu wolwazi kwindawo oya kuyo kunye nobungcali. Ke ngelixa uhambo lwe-adventure luyindlela yokuyila yokuhamba, lixesha lonyaka kwaye libekelwe abahambi abambalwa kakhulu.
10. Funda kwelinye ilizwe
Ayikho indlela engcono yokuhamba kunokufunda ulwimi lwasemzini okanye ukuthatha ikhosi yobugcisa kwindawo ephuphayo. Iinkqubo ezininzi zeelwimi zibonelela ngendawo yokuhlala kunye neepakethe zokubuyela ubugcisa, kuquka izidlo kunye nokhenketho ngokwesiko. Ukwengeza, udibana nabanye abahambi uze ufunde ngendawo abasuka kuyo.
ke, ukufunda phesheya ikuvumela ukuba uchithe ngaphezulu kweentsuku ezimbini kwindawo oya kuyo kwaye udibane nabahlali. Ngaphandle kokuba yindlela ebiza kakhulu yokuhamba, ukufunda kwelinye ilizwe yindlela eyodwa yokubona ihlabathi kunye nenye yeendlela ezilishumi zokuyila zokuhamba.
Cannes ukuya eParis oololiwe
Cannes ukuya koololiwe baseLyon
Apha Gcina A Isitimela, siya kukuvuyela ukukunceda ucwangcise uhambo olungalibalekiyo lololiwe ukuya elunxwemeni.
Ngaba uyafuna ukushumeka iposti yethu yebhlog “Iindawo ezili-10 ezimangalisayo zoMtshato eYurophu”Kwisiza sakho? Unokuthatha iifoto zethu kunye nesicatshulwa okanye usinike ikhredithi ngekhonkco kule post blog. Okanye nqakraza apha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fxh%2Fcreative-ways-travel%2F - (Skrolela phantsi kancinci ukuze ubone Code lungisela)
uyilo	CreativeTravel	I-CreativeWaysToTravel	indlela eyodwa yokuhamba